ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ Sex Virus ဝင်ရောက်ကူးစက်ခံရပါက- ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ Sex Virus ဝင်ရောက်ကူးစက်ခံရပါက- Author: lu bo | 9:08 PM | No မှတ်ချက် | သိန်း မြင့်
-Facebookအသုံးပြုတဲ့တချို့User account တွေမှာဆိုရင် Porn virus ကူးစက်ခံရပြီးတော့ sexy post တွေအဖြစ်နဲ့ အဲ့ဒီအကောင့်ဟာ မိမိရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊မိမိဝင်ထားတဲ့Groupတွေထဲကို Pornographic အပြာကားvideo ဖိုင်တွေအဖြစ် Virus နဲ့အလိုအလျောက်တွဲမိလျက်သား attached ဖြစ်ကာ၊ မိမိမတင်ပဲနဲ့ အလိုအလျောက် Shareမိခြင်း၊ ပို့စ်တင်မိခြင်း၊ မိမိဝင်ထားတဲ့ Group တွေ page တွေရဲ့comment တွေထဲမှာလည်း ဝင်၍ Shareမိခြင်း၊ စတာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး
Circulating ပုံစံနဲ့ အဲ့ဒီ Pornographic video ဖိုင်တွေဟာ အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့သွားစေနိုင်ပါတယ်-
-အဲ့ဒီလိုမျိုးvirusအကူးစက်မခံရစေဖို့အတွက် FacebookအသုံးပြုသူဟာFေBပ်ါမှာတွေ့တဲ့ Sexy videoများ၊ မသင်္ကာဖွယ်ရာလို့ယူဆရတဲ့ လင့်ခ်နဲ့ပုံများ၊ Applicationများ၊ ဥပမာ- 'Watch this video if you're curious' မင်းထူးဆန်းတာတွေ့ချင်ရင်ဒီဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီးSign Upလုပ်ရင်Likeအများကြီး ရမယ်၊အထူးအဆန်းတွေ့မယ်၊ဘာရမယ်ညာရမယ်စသဖြင့်၊ မက်လုံးပေးတဲ့စာနဲ့အတူ
Video၊Photo၊ Apk၊Files၊Fake websiteများ စတဲ့ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးအကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့လင့်ခ်များကိုနှိပ်မဝင်မိ စေဖို့နဲ့ လင့်ခ်ရဲ့URL Infoတွေကိုလည်း သတိထားဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ -တကယ်လို့Virusမိထားလို့မိမိအကောင့်ကို Infected ဖြစ်နေခဲ့ရင်အောက်ကအဆင့်အတိုင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်-
၁။မိမိFbအကောင့်ကိုLoginဝင်၍ News feeds ရောက်ရင်အပေါ်ကမျဉ်းသုံးကြောင်းပုံနဲ့ Menu tabနေရာကိုနှိပ်ပါ။
၄။ပြီးရင်အောက်ဆုံးကစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ Do you want other search engines to link to your timeline? ဆိုတဲ့စာကြောင်းပါတဲ့Boxအကွက်နေရာလေးကို နှိပ်ဝင်လိုက်ပါ။ ၅။ပြီးရင်နောက်တမျက်နှာမှာအောက်ဆုံးနားက Let other search engines link to your timeline စာသားဘေးနားကအမှန်ခြစ်ကို နှိပ်ပြီး ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ၆။နောက်တမျက်နှာရောက်ရင် Are you sure you want to disable public search စာသားအောက်မှာတွေ့တဲ့ အပြာရောင်Buttonနဲ့Confirmစာသားနေရာ ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်Backတချက်ပြန် ဆုတ်လိုက်ပါ။
၇။Do you want other search engines to link to your timeline? ဆိုတဲ့နေရာမှာ No ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရပါမယ်။Backပြန်ထွက်ပါ။
၈။Account Settings နေရာကိုတခါထပ်ဝင်ပါ။
၉။ နောက်တမျက်နှာရောက်ရင် ကိုးခုမြောက်နေရာကApps နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။
၁၀။အပေါ်ဆုံးကLogged in with Facebook ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါ။
၁၁။အဲ့ဒီမှာကိုယ်အသုံးမပြုတဲ့၊ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့၊ မသင်္ကာဖွယ်ရာယူဆရတဲ့apkများကိုဖျက်ထုတ်ပါ။ ကိုယ်ဖျက်ထုတ်မယ့်apk
၁၃။Removeနေရာကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်အခြားကိုယ်မသုံးတဲ့၊ ကိုယ်နဲ
့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့ Applicationများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း Removeလုပ်၍ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ၁၄။မိမိအကောင့်ကနေတဆင့်အလိုအလျောက် Auto spamပုံစံဖြစ်ပြီးstatusတင်မိတာ၊ Tag တွဲမိတာ၊ GroupတွေPageတွေမှာPostတင်၊ commentရေးမိတာမျိုးတွေ၊ Virus automatically attachedဖြစ်နေတာမျိုး တွေရှိ/မရှိ၊ဖြစ်မဖြစ်၊ပြန်လည်စိစစ်ဖို့အတွက်
-Activity Log စာသားနေရာကိုနှိပ်ဝင်ပါ။
၁၅။အဲ့ဒီActivity Logနေရာမှာမိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Postတွေ၊ Tagတွေ၊ Commentတွေ၊ Share၊ Like စတာတွေတွေ့မြင်ရပါမယ်။ အပေါ်ကFilter နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း ကဏ္ဍတစ်ခုခြင်းစီအလိုက် Post၊Photo၊Tag၊ Group၊Comment၊စသဖြင့်ကဏ္ဍအလိုက် သီးသန့်ခွဲထုတ်၍ကဏ္ဍတစ်ခုခြင်းစီမှာတွေ့ရတဲ့ Sex Virusနဲ့ပက်သက်တဲ့လင့်ခ်တွေ၊Postတွေ၊ Commentတွေ၊TagတွေကိုDeleteလုပ်၍ ဖျက်ထုတ်ပေးပါ။ ဒါဆိုFacebook Virus ကူးစက်ခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပြီလို့